Diyo post :: ‘लोडसेडिङ देखाएर करोडौं कमाउने कर्मचारी को–को थिए ? Exlusive खुलासा... ‘लोडसेडिङ देखाएर करोडौं कमाउने कर्मचारी को–को थिए ? Exlusive खुलासा... - Diyo post
काठमाडौं, २८ पुस । वर्षौंदेखि नेपाली जनता लोडसेडिङ झेल्दै आएका थिए । तर, यसवर्ष सरकार परिवर्तन भएसँगै काठमाडौं पोखरा सहितका केही जिल्लाहरुमा लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । यसरी बर्षौंदेखि नेपाली जनतालाई अध्याँरोमा राख्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, यहाँको व्यवस्थापन र तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहेको पाइएको छ । ‘लोडसेडिङ गराउन यहाँको कर्मचारी संगठनको समेत भूमिका छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाही भन्छन्,‘सोलार, जेनेरेटकर, डिजेल व्यापारीहरुको साँठगाठ रहेको छ ।’ दियोपोस्टसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा लोडसेडिङ गराउन भूमिका खेल्नेहरुको नामावली सहित खुलाशा गरेका छन् । प्रस्तुत छ शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विद्युत प्राधिकरण वा अन्य निकायमा रहेका कर्मचारी संगठनहरुलाई ‘साँढेहरु’को रुपमा चितृत गर्न थालिएको छ । के साँच्चै कर्मचारी संगठनहरु त्यस्तै हुन् ?
बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापनापछि गठन भएका कर्मचारी संगठनहरु जसरी स्थापित हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । उनीहरुको गतिविधि प्रति नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन् । यस्तोमा ट्रेड युनियन भित्रका गलत प्रवृति र कार्यहरु नै जिम्मेवार त छैदैछन् । राजनीतिक शक्तिकै आडभरोसामा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार तिर उन्मुख गराउने, भ्रष्टाचारको प्वाल देखाउँने र सरुवा तथा बढुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने लगायत कारणहरुले गर्दा ट्रेड युनियनहरु बद्नाम भए । कर्मचारीको पनि सेवा गर्न भनेर कर्मचारी संगठन बनेको हो, अर्थात सेवकका पनि सेवक । जनता मालिक हुन् । जनताका सेवक कर्मचारीहरु अरुभन्दा शिष्ट, जिम्मेवार, नम्र, जनसेवा प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक आड भरोसामा कर्मचारीमाथि सरुवा बढुवा गर्न सक्ने, नेपाली जनतालाई पनि दुःख दिने गरियो । युनियन भित्र अर्थवाद र अराजकता आयो ।
यसकारण यो आन्दोलन बदनाम भइरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न नयाँ पहलको जरुरी छ । सोही अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा युनियनहरुले जनतालाई अध्याँरोमा राख्न भूमिका निभाए । प्राधिकरणलाई वार्षिक अर्र्बौं घाटामा पुर्‍याइएको छ । प्राधिकरण भित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकतामा ट्रेड युनियनको प्रत्यक्ष समलग्नता छ ।
कसरी ट्रेड युनियनहरुले अराजकता फैलाएका छन् ?
यहाँ मन्त्री आउनुहुन्छ । मन्त्री निकटको ट्रेड युनियनले ‘फलाना’ सरुवा गर्नुस् यो मान्छे हाम्रो हो’ भन्ने गरेको छ । र, सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल गर्छ । अनि जब त्यो सरुवा भएको मान्छे वितरण केन्द्रहरुमा जान्छ त्यसले यहाँ बुझाएको पैसा उठाउँन जान्छ । उ प्राधिकरणको सेवा गर्न होइन प्राधिकरणलाई बेच्न जान्छ । त्यो कर्मचारीले अन्यसँग मिलेर मिटरलाई उल्टापाल्टा घुमाउने काम गर्छ । त्यो कर्मचारीलाई कार्बाही गर्न खोज्दा ट्रेड युनियनले यहाँ घेराबन्दी गर्छन् । एमडीले कारबाही गर्न खोज्दा माथि राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रोटेक्सन हुन्छ ।
तपाईंले भन्नु भएको ट्रेड युनियन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको ‘नेक्सस’ले मुलुकलाई लोडसेडिङ गराएर अध्याँरोमा राख्न कस्तो भूमिका निभायो ?
लोडसेडिङ किन थियो भन्ने कुरा म यहाँ बताउँन चाहान्छु । व्यवस्थापकिय कमजोरीको कारण लोडसेडिङ थिएन । नियतको कारण लोडसेडिङ थियो । हाम्रो लोड डिस्प्याचिङ सेन्टर (एलडिसी) छ । त्यहाँ १० तहको एउटै मान्छे ११ तह हुँदै ११ वर्षसम्म त्यहाँ प्रमुख भएर बस्यो । उहाँको नाम हो भूवन कुमार क्षेत्री । उहाँ कर्मचारी युुनियनसँग नजिक हुनुहुन्छ । उहाँको दाइ नरेन्द्र क्षेत्री अर्घखाँची १ बाट नेकपा एमालेकाे तर्फबाट सांसद नै उठ्नु भएको छ । त्यो भन्दा पहिले शेरसिंह भाट भन्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँपनि कर्मचारी युनियन वा एमाले निकट नै हुनुहुन्थ्यो । २० औं वर्षसम्म एउटै विचारधारा बोकेको मान्छे त्यहाँ राखियो । त्यहाँ उहाँहरुले एकलौटी तरिकाले के के गर्नुभयो ? त्यो तपाईंहरु हामीलाई प्रष्ट छ । नियतले गर्दाखेरी लोडसेडिङ भएको थियो । लोडसेडिङ भनेको आय आर्जन गर्ने असाध्यै राम्रो हतियार बनेको थियो । ‘देशमा लोडसेडिङ छ’, भन्ने सोलारका व्यापारीहरुसँग सम्झौता गर्ने र सोलार किन्न लगाउने, देशमा लोडसेडिङ छ भन्ने, खोलामा बगेको पानीबाट बिजुली ल्याउन छाडेर डिजेल भित्र्याउने । लोडसेडिङ देखाएर जेनेरेटर भित्र्याउने कार्य भयो । यसले व्यापारीक पक्षलाई पनि राम्रो कमाई खाने भाँडो बनेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्ता व्यापारीहरुसँग साँठगाठ बढाएका थिए । अर्को कुरा यहाँ प्राधिकरण व्यवस्थापन पक्ष पनि जिम्मेवार छ ।
ट्रेड युनियनको आडभरोसामा बसेका व्यवस्थापनका केही मान्छेहरुले १५६० मेगावटको फरकास्टको पिक डिमान्ड हुन्छ भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको थियो पुस महिनाको यतिबेला । हामीसँग ४ सय जेनेरेशन छ, ३८० भारतबाट आएको छ । ठ्याक्कै १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेर क्याल्कुलेशन गर्नुभएको थियो । १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उहाँहरुको व्यापारीहरुसँग हिसाब किताव हुन्थ्यो र करोडौंको डिजेल पेट्रोल लगायत सोलारको कारोबार बढ्थ्यो । करोडौं रुपैंयाँ लेनदेन हुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ । बरु खोलामा पानी स्पिल गर्ने तर नेपाली जनतालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर उज्यालो दिन उहाँहरु लाग्नु भएन । किन भने लोडसेडिङ नै उहाँहरुको कमाई खाने भाँडो थियो । अग्रिम तालिका दिएर उहाँहरुले कमाउनु हुन्थ्यो । त्यही व्यवस्थापनको जुठो गाएर यहाँका ट्रेड युनियनहरु उनीहरुलाई प्रोटेक्सन गर्न लागिरहेका थिए । यसरी ट्रेड युनियनको पनि लोडसेडिङ गराउनको लागि भूमिका रहेको छ ।
तपाईंहरु यतिका भद्रगोलकाबीच तपाईंहरु कसरी अछूतो रहनुभयो ?
हामी अन्य राजनीतिक कर्मचारी संगठन जस्तो होइनौँ । हामीले कर्मचारी सरुवा बढुवा वा त्यसमा आउने लाभलाई वास्ता गरेनौँ । हामीले जनतालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाइदेउ भनेर पटक पटक आवाज उठायौँ । हामी जनताको उज्यालोमा खुसी हुने संगठन हौँ । हामीले एक वर्षअघि पनि हाम्रो घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरेर लोडसेडिङ मुक्त देशको कल्पना गरेका थियौँ । अहिले हाम्रै घोषणा पत्र कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । यो देख्दा म आफै पनि खुसी छु । व्यवस्थापन पक्षले सुशासन कायम गरेको भए हाम्रो संगठनको सहयोग हुन्थ्यो ।
कर्मचारी संगठनहरुको मात्रै होइन व्यवस्थापन पक्ष र राजनीतिक नेतृत्वकै समलग्नताबीच कसरी लोडसेडिङ हटाउने अभियानले यो रुप लियो ?
पहिले नियतमा नै खोट थियो । व्यवस्थापन र पहिलेको राजनीतिक नेतृत्व लोडसेडिङलाई भजाएर धमिलो पानीमा माछा मार्दै आउनुभएको थियो । कृतिम लोडसेडिङ देखाएर कमाउने खेलमा लाग्नु भयो । तर, अहिलेको मन्त्री उज्यालो चाहानुहुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मन्त्रीलाई जान्छ । उहाँले आफ्नो व्यवस्थापन ल्याउनु भयो । कुलमान घिसिङलाई ल्याउनु भयो । एलडिसीको प्रमुख पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ । अहिले विष्णु कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । माथी दिमागले नै सहि सोच्यो भने तलको हात पनि सहि तरिकाले चल्न बाध्य हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नै सही छ । अहिले घण्टा घण्टामा व्यवस्थापन भइरहेको छ । अहिले पिक लोडमा चार सयको ठाउँमा ६ सय उत्पादन हुन्छन् । पूर्व, मध्ये, पश्चिमको पिक डिमान्ड हुने समय फरक छ । त्यसकारण अहिले सम्भव भएको हो ।
यो सम्भावनालाई तपाईंहरुले यो भन्दा अगाडी किन उठाउनु भएन ?
हाम्रो संगठनले यसभन्दा अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । एक वर्ष अघि मैले फेसबुक एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको थिए,‘लोडसेडिङलाई मान्छेहरुले कमाई खाने भाँडो बनाएर बसेका छन् ।’ हामीले पटकपटक यस्तो आवाज उठायौँ । उद्योगहरुलाई दिएको डबल फिडर दिएकोमा हामीले विरोध गरेकै हो । अहिलेको एमडीले हाम्रो संगठनको कुरा सुन्नु भयो । हाम्रा सुझाव मान्नु भयो ।
कुलमान घिसिङ आउँने वित्तिकै जाम खुल्ने प्राधिकरणको व्यवस्थापन कस्तो खालको हो ?
अहिले कुलमान घिसिङलाई आवश्यकता भन्दा बढी हाईलाइट गरिएको छ । यो उहाँकै लागि पनि राम्रो हुँदैन । अहिले एलडिसीको प्रमुख पनि फेरिएको हो । पहिले भूवन कुमार क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले विष्णु कुमार श्रेष्ठ आउनु भएको छ । अहिले मन्त्रालयको सचिव पनि फेरिनु भएको छ । कुलमान घिसिङ पनि आउनु भएको हो । र मन्त्री आउनु भएको हो । यी सबै भूमिका निभाउने फेरी मन्त्री नै हो । यो मन्त्री र माओवादीले यो जस नलिओस् भनेर सुनियोजित तरिकाले राजनीतिकरण गरिँदैछ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्राधिकरणका १२ हजार कर्मचारीको हात छ । आज कुलमान घिसिङलाई एक्लै श्रेय दिँदा १२ हजार कर्मचारी रुष्ट हुन्छन् । मन्त्री र एमडीको बीचमा पनि टसल हुन्छ । माओवादीलाई राजनीतिक फाइदा पनि लिन नदिने योजना भित्र यो नियत लुकेको छ । यो कारण कुलमान घिसिङलाई बढी चर्चामा ल्याईँदैछ । यो कारणले उनका सहयोगी नै विरोधी हुने स्थिति बन्छ ।
यो सम्पूर्ण श्रेय कुलमान घिसिङलाई मात्रै जाँदैन । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भनेको नेपाल सरकार र अहिलेको उर्जा मन्त्रीलाई जानुपर्छ । जनार्दन शर्मा, कुलमान घिसिङ, विष्णु कुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, असल नियतका सबै समुदायको भूमिकाले लोडसेडिङ मुक्त भएको हो । यसको श्रेय रातारात कुलमान घिसिङलाई मात्रै जाँदैन । कुलमान घिसिङ हिजोपनि ११ औँ तहको मान्छे त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो नी, कुलमानको पाइलो पर्ने वित्तिकै वा अनुहार देख्ने वित्तिकै लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन । यो सबै वातावरण मन्त्रीले बनाउनु भएको हो । यो टिमको भूमिका यसमा छ । एउटालाई बढी उचाल्दा अर्को तल झार्ने कार्य ठीक होइन ।
अब निकट भविष्यमा नै प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका निर्वाचन पनि हुँदैछ । तपाईंहरुका एजेन्डा के के हुन् ?
पहिलो एजेन्डा भनेको मर्यादित ट्रेड युनियनको निर्माण गर्ने हो । ‘ट्रेड युनियन अराजकताको अन्त्य र मर्यादित ट्रेड युनियन हाम्रो प्रण, लोडसेडिङ मुक्त देश सुदृढ विद्युत प्राधिकरण’ भन्ने मूल नारा छ । हामी मर्यादित ट्रेड युनियन बनाउँन चाहान्छौँ । कुनै राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने होइन । हामी राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक ढंगले अगाडी बढ्न खोजी रहेका छौँ । हामी कुनै पार्टीको भातृ संगठन बन्न चाहान्नौँ ।
तपाईंहरु त माओवादी निकट भातृ संगठनमा आवद्ध हुनुहुन्छ नी ?
हामी भातृ संगठन होइनौँ । हाम्रो कुरो माओवादीको मन्त्रीले सुनिदिनु भएको हो । हाम्रो सुझाव सल्लाहा एमालेको मन्त्रीलाई पनि सुनाउँन चाहान्छौँ । सहयोग गर्न चाहान्छौँ । असल काम गर्ने मन्त्रीहरु चाहे, कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको काँध थाप्न हामी तयार छौँ । हामी कुलमान घिसिङको मान्छे होइनौँ । कुलनमान घिसिङले असल काम गर्नुभयो हामीले उहाँको पक्षमा काम गर्छौं । कुलमान घिसिङ सक्षम मान्छे हो उहाँलाई जिम्मेवारी विहिन बनाउँन हुन्न भनेर राधा ज्ञावालीसँग पनि हामीले टसल गर्‍यौँ । उहाँ असल भएका कारण हामीले बोकेका हौँ । अहिलेका मन्त्री असल नियतका साथ आउनु भएकाले हामीले बोकेका हौँ । हामी राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न छोड्छौँ । अर्को कुरा हामीले विभिन्न स्थानमा तालिम सञ्चालन गर्छौं । ‘हामी जनताको सेवक हौँ,’ हामीले त्यो खालको व्यवहार, नम्रता शिष्टता दिनुपर्छ भनेर सिकाउँछौँ । कार्यालयको काम छोडेर पार्टीको झन्डा बोक्न हामी जाँदैनौँ । केही दिन अघि एमालेको कार्यक्रममा पनि देखियो । त्यो भनेको देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जनताको पसिनाबाट आएको करबाट तलब खाएर कुनै राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नु भनेको ट्रेड युनियन आनदोलन बद्नाम हुनु हो । यो राम्रो कुरा होइन । हामीले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि नगर्ने भनेका छौँ । ट्रेड युनियनको नेतृत्व लिनको लागि हुने अस्वस्त प्रतिस्पर्धाहरु जसले लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्ने परम्परा छ । त्यसलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गरेका छौँ । हामीले जनताको सेवालाई असर नपर्नेगरी शुक्रबारको अन्तिम समयमा ट्रेड युनियनको कार्यक्रम राखिरहेका छौँ । जनताको सेवालाई अवरोध गर्नेगरी हामीले कहिलेपनि गर्दैनौँ । हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आउनेलाई छोडेका छौँ । डिजिटल संगठनको अवधारणा ल्याएका छौँ । अब अहिलेको आइटीको युगमा प्राधिकरण पनि डिजिटलाइज हुनुप¥यो । संगठनको सदस्यताको फराम भर्न हामीले अनलाईन माध्यम प्रयोग गरेका छौँ । म आफै संगठनको अध्यक्ष ड्युटी गरेर बसेको हुन्छु । हाम्रो महासचिव, उपाध्यक्ष ड्युटी गर्नुहुन्छ । हामी आफै सेवा गर्न चाहान्छौँ । अरुको भन्दा उत्कृष्ट सेवा गर्न चाहान्छौँ । सरुवा र बढुवामा हुने ट्रेड युनियको सिफारिस हामीले अन्त्य गर्न चाहेका छौँ ।
ट्रेड युनियन भनेको को हुन् ? अनि उनले त्यहाँको डाइरेक्टर एमडीको सरुवा गर्ने ? कसले दियो त्यो अधिकार ? यहाँ कुकुरले पुच्छर हल्लाएन पुच्छरले कुकुर हल्लायो । हामीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मान्छौँ । हामी राजनीतिक ढंगले बायोस गरेर होइन असल नियतले हामी काम गर्न चाहान्छौँ । हामीले अन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न चाहेका छौँ । तुरुन्तै तालाबन्दी गरिहाल्ने, वा मान्छेमाथि कुटपीट गर्नु अराजकता हो । आन्दोलन शिष्ट तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले उठाउनु भएको एजेन्डालाई समग्र प्राधिकरणको कर्मचारीले कसरी बुझेका छन् ?
हाम्रो नेतृत्व आफै पनि प्राविधिक हो जसले हामी टेक्निकल भाषामा हामीले हाम्रो एजेन्डा राख्दै आएका छौँ । अहिले हाम्रो संगठनका व्यक्तिलाई विपक्षि संगठनका पदाधिकारी समेत तपाईंहरुलाई भोट हाल्छु भन्दै हिँड्नु भएको छ । उर्जा क्षेत्रमा पर निर्भरताको अन्त्यको लागि नेपाली पुँजीलाई जलविद्युतको विकास भन्ने नारा हामीले दिएका थियौँ । अहिले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भनेर आएको छ । यो एजेन्डा हाम्रो हो । यसलाई अहिलेको मन्त्री ज्युले स्वीकार गर्नुभयो । अदालतले पनि हाम्रो एजेन्डालाई जिताएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि हामीलाई जिताइसक्नु भएको छ । हामीले चुनाव जितिसकेका छौँ । यो लडाईँ भनेको उज्यालो र अध्याँरोको बीचमा हो । अध्याँरोलाई कसैले पनि रोज्दैन, उज्यालोलाई नै रोज्छन् । यो लडाईं अग्रगमन र पश्चगमनको हो । अहिलेको मन्त्री र एमडिको भण्डाफोर गर्नु भयो । छिर्न नदिनेसम्मको कुरा समेत उहाँहरुले गर्नुभयो । उहाँहरु नेपालमा अध्याँरो चाहानुहुन्छ हामी उज्यालो चाहान्छौँ ।